Kanjani nenkathi yokuthomba amantombazane?
Impilo, Impilo yabesifazane
Uma intombazane kusukela Babukeka babahle kepha mine ugly liphenduka dada? Khumbula kwenzeka kangaki, ekuqaleni kwakungemnandi engeyinhle, kwathiwa ukugconwa esikoleni, futhi kusukela ngaleso sikhathi zaqala izinguquko. Futhi ekupheleni okusezingeni eliphezulu intombazane esikoleni iba inkosazana. Kungani lokhu kwakwenzeka? A "iphutha" kuyo yonke into (nakuba akuyona iphutha, kodwa sokunconywa) kuyinto bathombe amantombazane.
Abazali kufanele uqaphele ukuthi lokhu kungenzeki ngokuzumayo unyaka owodwa noma emibili. Ochwepheshe bezifo, nenkathi yokuthomba amantombazane isingamakhilomitha nenkathi eyiminyaka engu-8-10, futhi uqede unaphakade.
Okokuqala isikhathi - iminyaka 7-8. Cha, ukuthomba amantombazane esikhathini sokuqala ayibonakali iso futhi trigger uqale ukusebenza kancane kancane. Izinguquko zenzeka hhayi ngaphandle kunalokho kahle ngaphakathi. Kuqala ezikhulayo kwesibeletho, amaqanda, kodwa ngaphambi ukubukeka izici ngokobulili yesibili, yebo, namanje kude.
Phakathi nale nkathi, kubalulekile ukuguqulwa ezingokwengqondo, kunokuba ngokomzimba. Into eyinhloko ukulungiselela intombazane ukuthi indima yakhe yesikhathi esizayo - indima le ntokazi isifazane, futhi, mhlawumbe, unina umndeni. Yiqiniso, lokhu kuqeqesha akuyona olwenziwe inkulumo kuyisicefe mayelana nentuthuko ngokobulili kanye nendima edlalwa yi abesifazane emphakathini. Kubalulekile ukwenza kube ngokusebenzisa umdlalo, okungukuthi, ngendlela playful. Funda inganekwane intombazane futhi ake iphupho lakhe, sakithi ukuzihlanganisa inkosazana, noma ukukhuthaza wayenesithakazelo impilo kamama, ezifana ukukhethwa izingubo, izicathulo, izimonyo. Girls, kakhulu, ungakwazi ukuthenga izimonyo. Kodwa-ke, i-enezingane ezinezidingo ezikhethekile. Into efana "Little Fairy" eziqinile lip isicwebezelisi. Okungukuthi, kubalulekile ukwethula zibe nomuzwa izimpawu intombazane izindima ubulili.
Isikhathi esilandelayo, esibonisa nenkathi yokuthomba amantombazane aqala eneminyaka engu-iminyaka engu-10. Okuningi ngokunembile ngaleso ubudala, futhi uyaqhubeka kuze iminyaka 12-13. Kufana kancane, kodwa nokho eshintsha ngokubukeka. Qala kancane ukwandisa umdlavuza webele. Ngisho noma kubonakala sengathi nje ukuvuvukala lula, okuyinto cishe ngeke lubonakale kuze iso kodwa likhona. Khulisa futhi labia, ukushintsha kwama-hormone. Kodwa izinwele pubic kanye emakhwapheni ayiveli. Kodwa nenkathi yokuthomba amantombazane kule nkathi zihlobene ukukhula. amathambo ngokungenangqondo futhi uhlasela zikhule. Ngaphezu kwalokho, isivinini ezahlukene le nqubo. Okokuqala, sikhule nemilenze namathambo ubuso bese -tulovische. Kwenzekani ngenxa lokhu? Girl uyofana i unodoli emincane Clumsy, ngomqondo ongokomfanekiso. Yingakho inkulumo mayelana Babukeka babahle kepha mine ugly. Ngaphezu kwalokho, isikhumba kuba okunamafutha ngenxa yezinguquko emazingeni hormone. Isikhumba akusho singakhuli ngokushesha njengezinye izitho, Ngakho-ke, ukuze unciphise amathuba imifantu isikhumba futhi elula izimpawu, ngenkuthalo ziqala ukusebenza nezindlala sebaceous, benza-ke okunamafutha. Ngakolunye uhlangothi - lokhu kuyinto enhle, ngoba konke kucatshangwa phandle nemvelo, kodwa ngenxa yobuhle akubukeki esikhangayo kakhulu. Ezimweni ezinjalo kungcono ukuthi iphathe ekhethekile okhilimu kanye lotions for isikhumba kwentsha, hhayi ukugeza ngensipho namanzi.
Sicela uqaphele ukuthi ukuthuthukiswa izingane ngokocansi - abafana namantombazane - kuyinto engalingani. Girls siyonezela ukukhula, futhi abafana futhi sihlale efanele. Kodwa lokhu kungokwesikhashana. Lwathi luphela esikoleni, futhi abafana namantombazane ahambelana, kodwa uma amantombazane ngemva kwalokho cishe ayibi, wena abafana, le nqubo iyaqhubeka. Ngakho-ke, amadoda njengabakhulu kunani abesifazane, futhi uma uqhathanisa ababethweswa iziqu emva kweminyaka 3-5, umehluko ekukhuleni kusobala kakade.
Isigaba sesithathu, lapho ephawula nokuvuthwa ngokocansi amantombazane - kusukela engu-13 kuya ku-17. Kwakuthinta ngalesi sikhathi, woza isikhathi sokuqala, amabele ezikhulayo ngentshiseko avele izinwele pubic kanye emakhwapheni. Eqinisweni, phakathi nalesi sikhathi kwakhiwe amantombazane futhi ephenduka ibe dada. Kukholakala ukuthi ngeminyaka 18 isiyifinyelele ukuthomba futhi ilungele ukuzala. Ngakho-ke imishado uvunyelwe kusukela lonyaka.
Umjikelezo wanyanga zonke: kuyinsakavukela kanye nokusuka
Kuyini dekubitalnaya isilonda ku wesibeletho?
I oluyilo inhlanzeko obuseduze abesifazane - indlela empilweni nenduduzo!
Hypoxia kwengane nemiphumela yaso.
Breech isethulo - izingozi futhi kanjani ukuze ujike
Sula Iodine. Indlela ukulungiselela okugeza yezipikili iodine?
MIIT: izibuyekezo abafundi, othisha kanye abaqashi. Moscow State University of sesitimela Ubunginiyela
Ama-amino acid. Ingozi kanye nezinzuzo
Umphenyi Russian uchungechunge "Abazingeli amadayimane": nabalingisi. Alexei Serebryakov
Wedding Arab: incazelo, amasiko, amasiko kanye izici
Yini uhlelo intela ingasetshenziswa le-IP: USN, UAT, OCHO patent
Hunting carbines KO-44: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Izihlahla amagilebhisi ngo-August. Izici ukunakekelwa lamagilebhisi ehlobo
Siyini-artichoke iJerusalema? Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka nezilimo eziyizigaxa yayo, ukupheka zokupheka
Izinhlobonhlobo Popular yellow plums
Yini ihlaziya ukuze nginikeze, ukuhlola isibindi: isibindi usizo ngesikhathi abasuke beludinga
Indlela ukususa "Kaspersky" nge "windose 7" Kunjalo na?